Naqshadaynta ciddiyaha 2014
Naqshadaynta naqshadda ee sannadka 2014 ayaa lagu kala geddisan yahay muuqaalka asalka, qaababka iyo midabada. Qofka jecel wuxuu noqon doonaa mid madow oo leh midabyo kale oo kala duwan. Sidii hore, qaabka ciddiyaha gaaban ama dhexdhexaad ah. Profi sidoo kale wuxuu nagu siiyaa sidoo kale ciddiyo aad u dheer oo ah midab-badheedh, oval ah ama qaabka ugu caansan ee fiiqan.
Noocyada cusub ee ciddiyaha 2014
Hogaamiyaha, sida hore, waa dayaxa iyo faransiiska Faransiiska. Hadda xariiqda dhoola-cadaynta waxay si siman u noqotaa midabyo midab leh, mararka qaarkood waa mid aad u yar ama weyn, taxadar la'aan ah ama si taxadar leh u goynaya. Ciddiyaha naqshadeynta cusub ee 2014 waa ciddiyo, oo lagu qaabeeyey qaab. Dooro midabyo kala duwan. Qurxinta, oo ka kooban laba nooc oo midab leh oo midabkiisu isku mid yahay, u eg dainty, laakiin mid ka mid ah waa matte, kan kale waa glossy.
Gabdhaha badan ee muhaajiriinta ayaa rinjigooda ku ridi kara ciddiyaha. Si aad wax yar u diyaargarow samee, farta waa in lagu rinjiyeeyaa mid kale: cilad ama jajab. In farshaxanka ciddiyaha, inta badan waa ciddiyaha farta aan la magacaabin, laakiin kan "sharciga" uma baahna in loo hoggaansamo. Tijaabo. Ha ahaado, tusaale, farta yar.
Sidoo kale waxay ahaanaysaa mid caan ah oo loo yaqaan ' ombre- popup'. Kala-guurka ma aha mid kaliya oo kaliya mid kale. Si aan caadi aheyn waxay u ekaataa marxaladda u dhaxaysa caarada hufan. Haddii ciddiyaha ay dheer yihiin, waxaa lagu qurxin karaa boogo ama dhagaxyo.
In isbeddelka, manida biyaha. Gubasho - farsamo oo ku lug leh isku dhafka isku dhafka midabada kala duwan. Marka aad guriga joogtid, waxaad si fudud u codsan kartaa ciddiyo yar oo ciddiyaha ah oo isticmaal cadayga si aad isugu qorto.
Fikradaha naqshadaynta ciddiyaha 2014
Ciyaarta oo leh xalka midabka ayaa kuu oggolaanaya inaad beddesho ciddiyaha, laakiin xitaa moodada muuqaal ahaan waxay u egtahay nadaafad leh qotodheer saddex-cabbir ah. Mugga ayaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo naqshado gaar ah, dhejisyo iyo qaabab muuqda. Kala duwanaanshaha kalkaaliyeyaasha noocaas ah ee manaafacaadka ayaa sii kordhaya sannad kasta. Waxay noqon kartaa maadada dhoobada, ciidda, baalalka, birta la shito.
Nidaamka cirifka jilicsan ee 2014 ayaa ah daabacaadda sawir. Qoraallada iyo walxaha sawiradu waxay u muuqdaan kuwo caadi ah oo dabiici ah ilaa xad, maadaama aysan mararka qaarkood abuurin saameyn xun oo calaamad ah.
Naqshadaynta ciddiyaha sanadka 2014 waxaa badanaa lagu qurxiyaa habab la macno ah. Tusaale ahaan, ciddiyuhu waxay jecelyihiin inay qurxiyaan xargaha. Haddii aad udhigto ciddiyaha, waxaad heli kartaa dhammaad ah oo aan xasilloonayn. Waxaad ku dhajin kartaa shucaac leh daabacaadda sawir. Nice waxay u egtahay nicmada qaabka caviar.
Ku qurxin farahaaga iyo rinjiyeyaasha. Sannadka 2014, dhagaxyo midab leh oo ka badan midabada caadiga ah. Haddii ciddiyaha ay dheer yihiin oo muuqaalkuna uu yahay mid aan caqli gal ahayn, ka dibna xawaarada salka u dhig. Haddii ay gaaban yihiin, ka dibna ka jooji doorashadaada biraha cawska ah ee asalka ah ee muraayada mugdiga ah. Caarada ciddiyaha ayaa lagu ridi karaa glitter-glitter - waxay noqon doontaa mid aad wax ku ool ah. Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha inay ka cabsadaan tijaabinta.
Naadiga quruxda badan
Dharka - isbedelka 2015
Hababka Coat 2015
Bootsiyada leh dabaqyada dabaqyada ee 2013
Noocyada Timaha ee Sanadka Cusub - waa midka ugu quruxda badan, quruxda badan iyo asalka dhabta ah ee timaha cusub
Qalabka timaha gaaban 2017 - isbeddellada ugu dambeeyay iyo isbedelka moodada
Maqaarka haweenka ee gaaban 2018 - isbeddellada isbeddelka, casriyeynta casriga ah, isbeddellada xilli-ciyaareedka
Fashion-ka 2017 ee gabdhaha - maxaa hadda ku jira munaasabadda?
Sawiro Sawir ah
Dharka ka soo jeeda Zuhair Murad
Dhalinyarada qurxinta ee xagaaga 2014
Dareeraha bilaashka ah ee miskaha
Libra iyo Sagittarius - iswaafajinta jacaylka
Daawo Michael Kors
Alps - ski resorts
Xargaha shinbiraha dhalada ah
Faa'iidooyinka Beeraha la kariyey
Noocyada kala go'ay ee yaanyada dhulka u furan
Andrew Lloyd Webber ayaa sheegay in uu isku dayay inuu dilo sadex jeer
Basasha xilliga uurka
Kabaha dumarka dayrta 2017 - yaa kabaha ku jira munaasabaddan dayrta?
Bacriminta for geedo yaanyo iyo basbaas - waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo dharka sare?
Doorashada qurxinta dusha
Miisaska leh roogagga iyo sheyga
Sumada Feerka waa qadar dhimasho oo loogu talagalay dadka
Salad leh ulaha iyo bisad
Manna waa jannada - waa halyeeyo kitaabi ah